BEERKA DHIRTA BEIJING EE GURIGA: ILAALINTA IYO QUUDINTA - CALEEMAHA DHASHA
Sidee loo jajabiyaa fiinaalka Peking ee guriga
Haddii aad ku cusub tahay warshadaha digaaga oo aad go'aansatid inaad bilowdo waayo-aragnimadaada naas-nuujinta, "feker" waa habka ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo! Tani waa caleemo hore oo la xaqiijiyay oo ah digaag hilib ah, taas oo si guul leh loogu isticmaalo taranta taranka taranka cusub iyo noocyo badan oo cusub. Ducks kuwaas oo dhan meel kasta oo labadaba ku jira miisaanka warshadaha iyo beeraha yaryar, oo ay ku kasbadeen faan wanaagsan oo ay ugu mahad celinayaan qabsashadooda, koritaanka degdegga ah iyo hilibka dheelitiran oo wanaagsan. Waxaa laga yaabaa, iyada oo la tixgelinayo dhammaan tayadaas, waxaa jira ficil ahaan aan u qalmin tartamayaasha loogu talagalay Peking.
Sida magaca caanuhu soo jeediyo, dalku waa China. Waa Boqortooyada ugu Sarreeya ee caanka ah ee loo yaqaan 'Peking Duck'.
Ma taqaanaa? Waxaa jira dhowr nooc oo asalkoodu yahay erayga "wargeyska wargeyska", oo loo isticmaalo in lagu sharaxo wararka been abuurka ah ee lagu daabacay warbaahinta. Waa in la qirsan yahay in dhammaantood aanay si toos ah ula xiriirin shimbirta, qaar waxay ku saleysan yihiin ciyaaraha erayada qancinta leh luuqado kala duwan. Halkaan waxaa ah labo sheeko oo ah "duck" wargeysyada: Dhamaadkii qarnigii XVIII, hal daabacan oo Faransiis ah ayaa daabacay habkii asalka ahaa ee ugaadhsiga, isagoo soo jeediyay cudur khaas ah oo ka mid ah shakhsi, kaas oo ku faafin lahaa cudurka dadka kale, waxaana laga qaadi karaa gacmo gacmo. Labo qarniyo ka dib, maqaal ayaa ka muuqda waddanka oo ku saabsan caanaha khafiifka ah ee shimbiraha, ayaa lagu xaqiijiyay xaqiiqda ah in hal qof, oo labaatan ducks ah, oo midba kan kale ku quudiyo, markaa dhammaadka waxaa jiray qofkii cunay dhammaan dadka kale.
Sidaas, aynu bilowno faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan duck Peking oo leh sharaxaad ka mid ah taranka.
Sida rasmiga ah, waxaa la aaminsan yahay in caanaha laga soo raray seddex boqol oo sano ka hor caasimadda Shiinaha. Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay halyeeyga, Shiineysku wuxuu ku hawlanaa xayawaan cad oo ah kunka sano ka hor, markii boqoradda Jin iyo Yuan, ay ugaarsadaan ducks si ay ugaarsadaan, waxay u suurtagashay inay qiimeeyaan tayada hilibka ee shimbirtaas iyo doonaya inay alaabtaan tayo sare leh ka helaan jikadooda.
Natiijo ahaan, ducks Peking ayaa markii hore la quudin jiray, ka dibna tarankoodii waxay bilaabeen gurigoodii, ugu dambayntii waxay heleen noocyo si fiican u koray ilaa maanta: ma ahan oo keliya shiinaha, laakiin adduunka oo dhan.
Waagii ugu yaraan boqol sano, shimbirkan ayaa si aan caadi ahayn loogu caanbaxay Maraykanka iyo Maraykanka oo dhan. Shiinaha lafteeda, ee soo saarista shimbirkan, dhammaan boqortooyooyinka ganacsiga waxaa la dhisay: waxay siisaa shaqaale tiro badan oo Shiinees ah, sidaas darteedna waxay siisaa dareen kasta oo ereyga ah.
Wax ka baro sifooyinka dabiiciga ah ee mooska, maryaha buluuga, Bashkir, Mulard iyo shimbiraha Mandarin.
Duck Peking waa mid ka mid ah dhismaha xooggan, jirka oo ballaaran, daboolay cadaan cad, marar badan kareemka kareemka, baalasha xooggan ee ku xiga jidhka iyo madax weyn oo leh wejiga muuqaalka caan ku ah iyo guntan midab leh oo casaan leh.
Lugaha gaaban, laakiin xoog leh. Qoorta oo gaaban oo dhaadheer iyo dabool yar oo kicin leh ayaa dhameytira muuqaalka. Miisaanka haweenka qaan-gaadhka ah wuxuu ku kala duwan yahay 3.5 kg, mararka qaarkood waxay qaadaan wax yar oo ka badan 4 kg. Xayawaanka yaryar ee si dhaqso ah u helaya miisaan leh daryeel leh habboon ayaa horayba u miisaan yar wax ka yar 3 kg da'da laba bilood. - Waa da'da this in hilibka digaaga uu yahay midka ugu fiican, jilicsan, cufan, oo isku dheelitiran, waxaana loo isticmaalaa inuu sameeyo Duck Peking caan.
Ma taqaanaa? Britishka caqli-yaqaanka ah waxay xushmeynayaan xayawaan aad u badan oo iyaga aawadood u diyaar ah inay si ku meel gaar ah u joojiyaan dagaalka. Sidaa darteed waxay ahayd bilowgii qarnigii la soo dhaafay ee Dublin, halkaasoo colaadaha u dhexeeyay Ingiriiska iyo Irish ay isku dayeen in ay xalliyaan dhulka beerta qaranka. Waqtiga quudinta ducks ee ku nool parkka, colaad joojisay, iyo labada dhinac daawaday qadarin ah ee cuntada unhurried ee shimbiraha.
Ducks Beijing waa faa'iido badan oo ku saabsan koritaanka. Si ka duwan, waxaad ka sheegi kartaa, ka soo horjeeda qoysaska xayawaanka ah, shimbirahaas waxaa laga heli karaa - hal drake shantii haween ah. Isla marka uu gaaro da'da lix bilood, nuugu wuxuu bilaabmayaa inuu buulkoodu noqdo, xilligiisii ​​wax soo saarku wuxuu socon karaa ilaa saddex sano. Imisa ukun oo ah duck Peking oo dabiici ah, dabcan, waxay kuxirantahay xaaladaha xabsiyada: celcelis ahaan, daryeel wanaagsan, waxaad ku xisaabi kartaa boqol ama xitaa nus sanadkiiba.
In duck Peking, ma hilibka kaliya waa la qiimeeyay, laakiin sidoo kale ukunta naftooda. Waxay miisaamaan illaa 90 g (tani waa hal iyo badh ilaa laba jeer ka badan ukunta digaaga).
Baro sida guri loo dhiso gacmahaaga oo aad u qalabeysid qol ka baxsan indoutok.
Ukunta - waa raaxo dhab ah iyo, sidoo kale, aad u yar. Wadamada bariga, tusaale ahaan, Japan iyo Shiinaha, waxay xitaa ku soo qaateen geedo iyo dhir udgoon, taas oo ay ugu wacan tahay badeecada la kaydin karo dhowr bilood.
Ma taqaanaa? Cuntooyinka aan caadiga ahayn ee ukunta duck, laga yaabee, waxay ku faani karaan Shiinaha iyo Filibiiniyaanka. Kuwa ugu horreeya waxay ku daraan abuurka sisinta iyo lime sheyga, taas oo ka dhalatey taas oo ah suukku ku iibsado midab cagaaran, laakiin borotiinka ayaa madow. Cuntadani waxaay la yiraahdaa "ukunta imperial". Laakiin Filipino "balut" - inta badan waa ukun la kariyey ka dib markii ay yaryar oo buuxa ay ku jirto gudaha meeshii caadiga ahayd ee cad ama cadaan.
Sidaa darteed, duck Peking wuxuu leeyahay wax soo saarka aad u sarreeya, iyada oo la siiyay koritaanka degdeg ah, guusha hore ee baaluqnimada iyo tiro badan oo ukun ah. Hase yeeshee, tarankan ma joogaan halkaas.
Ducks Peking marka la barbardhigo digaagga kale waa mid aad u fudud in lagu hayo. Marka laga soo tago doodo badan "loogu talagalay" nooca noocan ah, waxaa jira xoogaa dhib ah.
Faa'iidooyinka ilamaha (tixgelinta kor ku xusan) waa in duck Peking:
si fiican ugu habboon xaaladaha cimiladalabadaba aad u kulul iyo si aad ah u qabow (haddii kale ma aysan awoodin in ay guulaystaan ​​tiro sida dalal badan iyo qaaradaha);
aad u jilicsan marka laga eego xulashada cuntada;
si degdeg ah u kordho miisaanka;
hore u bilaabaan inay degdegaan (noocan oo ah nooca biyuhu, celceliska da'da uu haweenku dhigo ukumaha ugu horeeya waa 6-8 bilood, iyada oo Peking waqtigaani uu yimaado xadka hoose);
waa la furi karaa meel ka fog biyaha (Si kastaba ha ahaatee, inta badan duckska gudaha ah ayaa leh awooddan, si kastaba ha ahaatee, waa in lagu dhajiyaa in ay ku jirto biyo furan in biyuhu ay soo saaraan qiyaasta tobnaad ee cuntada, marka jiritaanka meel ballaaran oo ballaaran ayaa si weyn u badbaadin doona caanaha);
wuxuu leeyahay hilib tayo sare leh Xaddiga dufanku hooseeyo.
Baro wax walba oo ku saabsan abuurista duurjoogta, ducks, pheasants, beef, turkiga iyo broilers.
Xaqiiqdii, waxaa jira hal naafo oo keliya. Ducks kuwaas oo aan diyaar u ah in ay ukunta, iyo sidaas darteed mararka qaarkood waxaa lagama maarmaan ah in ay abaabulaan kulul ee macmal ah. Taasina waa sababta tartanka kaliya ee ku jirta caanuhu waa nuucda ukunta ukunta, taas oo, si kastaba ha ahaatee, waxay ka hooseysaa "jahawareer" dhammaan xuduudaha kale.
Mararka qaarkood beeraleyda digaaga ayaa sidoo kale xusuusta baahida sare ee shimbirta ka dhigaysa qallalka qolka lagu hayo, hase yeeshee tani waxaa loo saari karaa kalsooni digaag kasta.
Sidii la yiri, shimbirahan ayaa si dhakhso ah u kora. Laakiin kaliya ilaa tan ugu horreysa, ka dibna miisaanku si aad ah ayuu u hooseeyaa (horumarinta "baal"), iyo, si caqli ahaan u hadla, nuucgu wuxuu joojiyaa inuu iska bixiyo.
Intaa waxaa dheer, hilibka yaryar waxaa lagu qiimeeyaa mid aad u sarreeya kii hore, sidaas darteed "Pingok" waxaa badanaa lagu dilaa da'da laba bilood. Dabcan, dhamaan faa'iidooyinka kor ku xusan iyo faa'iidooyinka taranka waa la qiimeyn karaa oo keliya haddii laba xaaladood la buuxiyo: marka hore - helitaanka alaabta tayo sare leh labaad - u hoggaansamida xaaladaha ugu habboon ee xabsiga, oo ay ku jiraan qolka, cuntada iyo xitaa abuuritaanka qiiro dareen ah.
Waxaan bilaabeynaa inaan u diyaarino dhismaha guriga si dabaq ah.
Waa muhiim! Ha ku rakibin xayndaabka dawa si toos ah dhulka. Dhulku waa inuu si taxadar leh u daboolan yahay loona ilaaliyaa ka hortagga jiirka ee jecel inuu koro dhismayaasha xiran ee jiilaalka.
Haddii dabaqa la taaban karo, qoryaha waa in la dhigaa. Darbiyadu waxay noqon karaan lebbiska ama alwaaxda, laakiin si fiican ayaa loo daboolay si looga fogaado naqshadeynta, dabka kuleylka iyo qoyaanka qoyaanka, taas, sida la sheegay, ma jecla Ducks Peking oo aad u badan. Heerkulka guriga dhexdiisa, oo dhan oo aan qabyo ahayn "feker", bacriminta ugu badnaan waa inay ka bilaabataa 10-25 ° C wakhti kasta oo sanadka ah. Iftiinka qolka waa inuu ahaado mid aad u badan.
Intaa waxaa dheer, inta lagu jiro xilliga qaboobaha guriga waa in si cad loo iftiimiyo (mudada gudcurku waa inuusan ka badnayn 11-12 saacadood maalintiiba) - sidaas darteed shimbiraha ayaa duuli doona hore iyo ka wanaagsan. Si kor loogu qaado saamaynta iyo korontada korontada, waxaa lagu talinayaa in la bixiyo nalalka laga joojiyay saqafka oo leh dib-u-celin gaar ah.
Tirada shimbiraha mitir labajibbaaran waa in aanay ka badnayn afar qof qaangaar ah ama darsin darsin ah, laakiin xilliga qaboobaha waxaad dejin kartaa ducks mid ama laba qashin.
Goobta shimbirta waa inay ku jirtaa naqshad ugu yaraan 5cm iyo albaabka si adag u xiran iyo albaab wanaagsan. Cabbirada manhajka noocan oo kale ah wuxuu noqon karaa 40x40 cm, waana ka wanaagsan in laga dhigo koonfurta. Ka dib dabaqa qolka dhexdiisa ah waxaa la dhigaa lakab qaro oo cows ah, sida balka ama qoryaha qoryaha. Qashin ayaa loo baahan yahay in si joogto ah loo beddelo (u diyaargarow xaqiiqda ah in aad u baahatid inaad soo saarid qalabkaas oo kale marka la eego qiyaasta 20 kg sanadkii sanad walba).
Sidoo kale hareeraha wareegga guriga, oo aan lahayn dariishado, waxaad u baahan tahay inaad u qalabeysid cawska si loogu dhajiyo ukunta qaab muuqaal ah oo leh 50 cm gees ahaan, sida maaddada, qoryaha ama taangiga ayaa ku habboon.
Waa muhiim! Haddii shinbirahaaga mar walbahaaga ku xoqan - waxay ka dhigan tahay inaadan abuuri karin xaalado kugu filan oo kugu filan. Tani waa shimbir aad u shucuur leh oo u baahan nabad iyo xasillooni.
Nadiifinta joogtada ah ee guriga digaaga iyo hawo-qaadashadu waa damaanad ah in dadka deggan ay awoodi doonaan in ay qaataan jiilaalka si caadi ah, sababtoo ah si ay u noolaadaan qabowga, najaaradu waa inay leeyihiin baadad nadiif ah oo nadiif ah.
Sida lagu sheegay, duck Peking wuxuu samayn karaa iyada oo aan kaydka, laakiin weli ku socda hawada u furan waa mid aad u faa'iido leh shimbiraha.
Haddii nuucaan aan la siinin fursad ay ku ugaarsadaan biyaha, quudinta iyo cabitaanada waa in si habboon loogu rakibay aagga lugaynta. Si aad habeenkii u isticmaashid xaalad kasto ducks waa inay ku jirtaa guriga.
Ma taqaanaa? Calaamadaha muuqaalka ah ee dadku ugu yeeraan xakameynta waxay dhigi karaan oo kaliya dheddigga duck, laakiin qoraalka ah inuusan jirin wax codsi ah ee codadka - dhammaystiraan macno darro. Si looga saaro khuraafaadkan, waa ku filan in la sameeyo tijaabo ku habboon qolka xiran ee leh akufik wanaagsan, oo aan dhegeysanaynin kaabayaasha duxda ee dhexda ee balli.
Marka qoyaanku ka sarreeyo 70 % iyo heerkulka hawada ee hoose + 5 ° S ducks waxay ka fiican yihiin joogitaanka gudaha gudaha laakiin cimilada si fiican u socdo - + 16 ° S.
Labadaba guriga iyo socodka, nuujiyaasha ducks waa in laga sameeyaa guddi qaro weyn (ugu yaraan 2 cm).
Wixii shimbir qaangaar ah, xajmiga feederaha waa 23x110 cm, oo loogu talagalay dhallinyarada - 14.5 cm 1 m. Qorsho alwaax ah waa in la siiyaa ka hor quudinta. Caanaha cabitaanka waxay ku yimaadaan naqshado kala duwan, laakiin saxaraha iyo musqulaha looma jeedin ujeedadaas - si fudud ayaa loo dhigaa oo loola jeedaa.
Waxaad iibsan kartaa qalabka la diyaariyay (tusaale ahaan, faaruqin ama ibta naas), ama waxaad ka samaysan kartaa qalabka wax lagu duubo adoo isticmaalaya sawir aad jeceshahay internetka.
Waa muhiim! Ducklings yar yar cabin, gabi ahaanba madaxdooda ku biyo. Tani waa caadi, gaar ahaan kuleylka. Sidaa darteed, naqshadeynta khamriga ee loogu talagalay carruurta waa in ay ku jiraan waxyaalahan shimbirta.
Waxyaabaha ku jira unugyada
Muuqaal kale oo muuqaal ah - waxaa lagu qasi karaa qafis. Dabcan, cabirkeedu waa inuu u oggolaado shimbirta inay guurto. Unugyada ayaa la isku dhejin karaa dhawr qaybood oo kala duwan. Dhismaha laftiisa ayaa laga sameyn karaa shabakad, laakiin dabaqa, sagxadda hoose, waxaa lagama maarmaan ah in la saaro guddiyada (kiisaska ba'an - mesh aad u qurux badan) si ay shimbiraha aan ku dhejin baqashada.
Waa muhiim! Boogaha koray baqashada ayaa kor u qaadaya miisaanka si ka dhaqsaha badan "kuwa" bilaashka ah, taas oo ka imanaysa ganacsiga aragtida, waa mid faa'iido leh. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha noocaas ah, shimbirku wax badan ayuu cunaa waxaana si gaar ah ugu baahan yahay helitaanka joogtada ah ee biyo nadiif ah iyo quudin.
Fahmida sida loo quudiyo booliska Peking, waa in maskaxda lagu hayaa in geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadani ay aad uga dhaqsaha badan yihiin biyo badan oo kale.
Dhab ahaan, waa muuqaalkan oo bixiya miisaan degdeg ah oo miisaanka nool ee shimbir: Dhammaan nuucaan oo kale ah oo la cuno hal mar ayaa si buuxda loo dhajiyay afarta saacadood. Dheeraad ah, tan iyo markii aan ka hadlayno taranka hilibka, dareenka gaarka ah waa in la siiyaa qadarka borotiinka ee ku quudinta, haddii kale dhammaan faa'iidooyinka Peking ayaa gabi ahaanba lumi doona.
Haddii nuugida laga ilaaliyo kaydka (meesha gooryaanka kala duwan, dirxiga iyo xayawaanka kale ayaa la heli karaa), shimbirta cunnooyinka ee cuntooyinka borotiinka waxba kuma laha dayactirka.
Qeyb ka mid ah shimbiraha, sida la sheegay, waa gebi ahaan aan qabyo ahayn, oo leh raashin aad u wanaagsan, waxay macno ahaan u cuntaa wax walba - xayawaanka iyo xayawaanka cuntada. Waxa kaliya oo muhiim ah in tirada guud ee quudinta maalin kasta shimbir qaangaar ah lagu hayo 340-350 g.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad baratid sida loo karsiinayo dhismaha naftaada.
Cuntada "pekingki", iyo sidoo kale qaraabada kale, guryuhu waxay badanaaba ka koobanyihiin firir (qamadi, ari, miro, galley, digir), cagaarka (nettle, alfalfa, dhirta, løgre, sedge, daal, koraya dusha biyaha) , khudradda iyo dalagyada xididka, iyo sidoo kale qashinka miiska martida.
Waxaa sidoo kale jira quudin gaar ah for shinbiraha. Cuntada, lafaha, qolofka ama jeesjiska waa in lagu daraa cuntada.
Noocyada loo tixgeliyo annaga ayaa ah kuwo adag oo aan marar dhif u lahayn daryeel wanaagsan. Ka hortagga ugu fiican ee dhibaatooyinka waa qalabka saxda ah iyo nadiifinta joogtada ah ee guriga, hawo qaadashada, cunto dheellitiran, iyo sidoo kale tallaal waqtigii loo qabtay.
Waa muhiim! Khatarta ugu weyn ee ducks waa cunto quudin iyo bakteeriyadu ku jirto jawi qoyan iyo wasakhaysan.
Dib udhigga koritaanka, cunto xumo iyo xanaaq xumo ayaa sababi karta oo keliya xanuun la'aan, laakiin sidoo kale waxaa laga helaa la'aanta fitamiinada. Dhibaatooyin badan oo culus ayaa kufilmaamaya goosiga (haddii shimbirku liqay wax xayawaan ama wayn), coccidiosis, aspergillosis, pasteurellosis, iyo xitaa daacuun.
Cudurradani waxay isu muujinayaan siyaabo kala duwan, laakiin waa inaadan isku deyin inaad iska baarisid, waa saxan tahay inaad tagto dhakhtarka. Si kastaba ha noqotee, sida la sheegay, dhibaatooyinkaas badankoodu waxay soo baxaan sababo aan ku-waafaqsanayn nadaafadda, nafaqo-xumada iyo iska indha-tiridda talaalada.
Nafaqeynta iyo koritaanka
Ducks Beijing, sida la sheegay, si wanaagsan u qaado, iyo farcankiisa si fiican uga badbaado badan digaagga kale (digaagga, berriga, turkiga). Si kastaba ha ahaatee, mid waa in loo diyaar garoobo xaqiiqda ah in isugeynta ukunta ay dhici doonto iyada oo aan joogin hooyada. Si aad u xalliso dhibaatada, jeebka waxaa lagu kululeeyaa laydhka korontada ama xiraa daboolka kuleylka lagu duubo maro jilicsan (heerkulka waa in lagu hayaa + 30 ° C).
Dhammaan shuruudaha kore ee xaaladda nadaafadda ee qolka iyo cawaaqibta aan ku-waafaqsanayn heerarkan waxay khuseeyaan laba-jibaaridda dhalinyarada.
Culeyska, rabitaanka cuntada oo liita, la'aanta dhaqdhaqaaqa, iyo muuqaalka caksiga ee ducklings waa calaamad muujinaysa in qolku aad u kulul yahay. Haddii caruurtu ay isu yimaadaan kooxo iyo squeal indignantly - waxay u badan tahay, inay kudheeraadaan. Si aad u quudiso dhallinyarada maalmaha ugu horreeya noloshooda waa cuntooyinka borotiinka ugu fiican, tusaale ahaan, digaagga digaagga la kariyey, waxyaabaha caanaha laga sameeyey - kefir, yogurt, jiis, caano, iwm.
Si tartiib ah ugu darso cagaarka la jarjaray, taas oo aan siino dadka waaweyn. Laga bilaabo maalinta tobnaad waxaan soo saarnaa khudradda cagaaran ee la kariyey iyo nadiifinta cuntada.
Waa muhiim! Maalmaha ugu horreeya ee nolosha, ducklings waa in si taxadar leh loo eego: haddii aysan iyagu cunin iyaga keligood, mararka qaarkood waa in la dhajiyo leh xal aad u daciifiya daloolka potassium ka dibna ka lulaya ukunta la karkariyey ee hoosta ay gogol. Howlaha noocan oo kale ah waxay inta badan ka caawisaa kicinta habka cuntada.
Waxaad quudin kartaa ducklings leh cunto tayo sare, siriyaal, hadhuudh la jajabiyey. Waxa kaliya oo muhiim ah in cuntada la kala duwo oo isku dheeli tiran. Tirada cuntada ee marxaladaha ugu horeeya waa ilaa shan jeer maalintii, halka dhallinyaradu had iyo jeer ay cabbi karaan biyo nadiif ah.
Ugu dambeyntii, muhiimad muhiim ah oo ku saabsan horumarka caadiga ah ee shirkadda dhalinyarada waa meel qol ah: afar carruur ah oo guriga ku jira, ayaa ugu fiican in aan ka badnayn labo shinbirood oo waaweyn.
Haddii dhammaan sharciyadan si adag loo raaco, qoyskaaga waxaa mar walba la siin doonaa oo kaliya maaha kaluunka oo wanaagsan iyo nafaqo leh, laakiin sidoo kale dakhliga ku haboon.